मन्त्री माग्दै बूढानीलकण्ठ पुगे ओली समूहका यी सांसद, क-कसले कुन-कुन मन्त्रालय पाउदैछन ? — Imandarmedia.com
मन्त्री माग्दै बूढानीलकण्ठ पुगे ओली समूहका यी सांसद, क-कसले कुन-कुन मन्त्रालय पाउदैछन ?
काठमाडाैं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सत्ताबाट बाहिरिएसँगै उनी समूहका सांसदहरु मन्त्री पद माग्दै शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठ पुगेको खुलासा भएको छ ।
देउवालाई विश्वासको मत दिने बेला ‘फ्लोर क्रस’ गरेर भए पनि भोट हाल्ने भन्दै ओलीनिकट एकजना एमाले सांसदले देउवासँग आफूलाई मन्त्री बनाइदिन आग्रह गरेका छन् ।
बूढानीलकण्ठ पुगेका ती एमाले सांसदले देउवालाई भने, ‘तपाईले विश्वासको मत त लिनैपर्छ, त्यसबेला म केपी ओलीतिरका ८ जना सांसदलाई फ्लोर क्रस गराएर भोट हाल्न लगाउँछु, यस वापत मलाई पनि सरकारमा सहभागी भएर जनताको सेवा गर्ने अवसर मिलाइदिनुपर्यो ।’
ओली क्याबिनेटमा काम गरेका ती पूर्वमन्त्रीले देउवासँग भने, ‘तपाईलाई एमालेका सांसदको मत चाहिन्छ भने ठिकै छ, चाहिँदैन भने म केही भन्दिनँ ।’ बूढानीलकण्ठ स्रोतले ओली पक्षका पूर्वमन्त्री देउवा निवासमा आएको पुष्टि गर्यो । तर, गोपनीयताका कारण उनको नाम भने ‘एक्स्पोज’ नगरिदिन आग्रह गर्यो ।
स्रोतले भन्यो, ‘अहिले नाम उल्लेख नगरौं, तर उनी सुदूरपश्चिमका एमाले सांसद हुन् । पछिल्लोपटक केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्दा हटाएपछि उनी ओलीसँग रिसाएका रहेछन् ।’
ओली समूहबाट कित्ता परिवर्तन गरेर मन्त्री बन्ने दौडमा लागेका ती एमाले सांसद ओली क्याबिनेटको मन्त्री बनेका बेला विभिन्न अभिव्यक्तिका कारण विवादमासमेत तानिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री देउवाले नेकपा एमालेको कोटाबाट मन्त्री बनाउँदा माधव नेपालको सिफारिसअनुसार मात्रै मन्त्रीको छनोट गर्ने भएकाले ओली पक्षका ती सांसदले मन्त्री खान पाउने सम्भावना चाहिँ न्यून छ ।
तथापि उनले आफूसँग ८÷९ जना सांसदहरु रहेकाले माधव नेपालसँग पनि यसबारेमा कुरा गर्ने र मन्त्री बनाइएमा ओलीको कित्ता छाडेर माधव नेपालतर्फ लाग्ने बूढानीलकण्ठलाई वचन दिएको स्रोतले बतायो । देउवाले विश्वासको मत नपाएर सरकार ढल्ने अवस्था आएमा आफूले काँध थाप्ने ती नेताले वचन दिएको बुझिएको छ ।
स्रोतका अनुसार उनले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि बूढानीलकण्ठमा पुगेर बधाई दिइसकेका छन् । तर, त्यसअघि सर्वोच्च अदालतको फैसला नै नआइकन पनि उनले बूढानीलकण्ठमा पुगेर देउवालाई संसद पुनःस्थापनापछि फ्लोर क्रस गर्ने वचन दिएका थिए ।
यसैबीच नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हतारमा मन्त्रीहरू नछान्न र सबै मन्त्रालयले आफैँले मात्र नराख्न सुझाव दिएका छन् । अहिलेको गठबन्धनलाई बचाउन र त्यहीअनुसार गठबन्धन र पार्टीमा सन्तुलन कायम गर्न सिटौलाको सुझाव छ ।
‘मन्त्रालयको बाँडफाँट गरेर गठबन्धन र आफ्नो पार्टीभित्र कसरी सन्तुलन काम राख्ने, सबै साथीहरूको भावनालाई कसरी समेट्ने सोच्नुपर्छ’ सिटौला भन्छन्, ‘यी सबै कुरा बुझेर नहतारिकन समयमा निर्णय लिने कुशलता प्रधानमन्त्रीमा चाहिन्छ ।’
नेपाली काँग्रेसले प्रधानमन्त्री पाउनु नै ठूलो कुरा भएकाले अहिले देउवालाई मन्त्रीका लागि ‘प्रेसर’ गर्न नहुने सिटौलाले काँग्रेसका अन्य नेताहरूलाई पनि सुझाव दिएका छन् । उनी भन्छन्, ‘माधव नेपालजीको समर्थनबाट उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई धेरै प्रेसर गर्‍यौँ भने हामीले हाम्रो आफ्नै जिम्मेवारी बुझ्दैनौँ । सुझाव दिऔँ, अहिले दबाब दिने अवस्था छैन । प्रधानमन्त्री हाम्रो भइसकेपछि कुन मन्त्रालय लिने, नलिने भन्नेमा हठ गर्नु उपयुक्त छैन ।’
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई काँग्रेस नेता सिटौलाले दिएको सुझाव जस्ताको त्यस्तै–
”प्रधानमन्त्रीले सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरूको भावनालाई जोडेर हिँड्न सक्नुपर्छ । हतारिएर हुँदैन । जसपाले निर्णय गरेको छैन । माधवजीको स्थिति के हुने हो, उहाँको पार्टीको अन्तर्द्वन्द्व चल्दैछ । त्यो द्वन्द्वले एकता गर्ने हो कि, उहाँलाई कहाँ पुर्‍याउने हो, थाहा छैन ।
यी सबै कुरा बुझेर नहतारिकन समयमा निर्णय लिने कौशलता प्रधानमन्त्रीमा चाहिन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई हतारो गर्नुहुँदैन भन्ने पक्षमा छु । मूल कुरा उहाँले गठबन्धनलाई जोगाउनुपर्छ । गठबन्धनको भावनालाई मर्न दिनुहुँदैन । विश्वासको मत लिने तयारीका साथ उहाँले अगाडि जाने कोसिस गर्नुपर्छ । यसैका भावनाका आधारमा मन्त्रालयको बाँडफाँट गरेर गठबन्धन र आफ्नो पार्टीभित्र कसरी सन्तुलन काम राख्ने, सबै साथीहरूको भावनालाई कसरी समेट्ने, उहाँले सोच्नुपर्छ ।
मन्त्रालयको भागबण्डा फस्ट म्यान वा एक जना प्रतिनिधिले गर्ने हो । प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनमा कुरा मिलाएर मन्त्रालय बाँडफाँट गरिसकेपछि के गरौँ भन्दा हामीले सल्लाह दिने हो नि त ! अहिले म आदि–इत्यादि केही भन्ने मुडमा छैन ।
चुनावमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अर्थ मन्त्रालय हुन्छ, गृह मन्त्रालय हुन्छ । सबै आफैँ राख्छु भनेर हुँदैन । निजामती कर्मचारीलाई नियन्त्रण र परिचालन गर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कुन मन्त्रालय आवश्यक छैन भन्ने छैन । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई सबै छोडिदिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई यो गर र त्यो नगर भनेर भएन नि ।
प्रतिनिधिसभामा २३ प्रतिशत पनि छैन, १६५ मा २३ वटा जितेको छ । हामीले प्रधानमन्त्रीलाई धेरै प्रेसर गर्नु उपयुक्त हुन्छ त ? यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री बन्नु नै सबैभन्दा ठूलो सफलता ठान्नुपर्छ ।
माधव नेपालजीको समर्थनबाट उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री एकदम होसियारीपूर्वक हिँड्नुभएन भने त सरकारको भविष्य के हुन्छ ? त्यसकारण यस्ता कुरामा हामी संवेदनशील भएनौँ र प्रधानमन्त्रीलाई धेरै प्रेसर गर्‍यौँ भने हामीले हाम्रो आफ्नै जिम्मेवारी बुझ्दैनौँ ।
उहाँले क्रमिकरुपमा गर्दै जानुहोला । आवश्यक पर्‍यो भने हामीसँग सुझाव माग्नुहोला । सुझाव दिऔँ, अहिले दबाब दिने अवस्था छैन । यो प्रधानमन्त्रीय पद्धति हो । यहाँ सबै मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीको अधिकार प्रत्यायोजन गरेर काम गर्ने हुन्
मन्त्रिपरिषद् प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रणमा रहन्छ । प्रधानमन्त्रीकै निर्णय लागु हुन्छ । मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा काम गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री हाम्रो भइसकेपछि कुन मन्त्रालय लिने, नलिने भन्नेमा हठ गर्नु उपयुक्त छैन । मेरो सुझाव छ–गठबन्धनको भावनालाई आत्मसाथ गरेर अगाडि जान सक्नुपर्छ ।”
काँग्रेसका ‘छाया मन्त्री’ साँच्चैको मन्त्री बन्न दौडधूप
नेपाली काँग्रेसका नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै हिजो छाया मन्त्री रहेकाहरू अब साँच्चैको मन्त्री बन्नका लागि दौडधूपमा लागेका छन् । विगतमा केपी ओलीको सरकारमाथि निगरानी गर्न नेपाली काँग्रेसले छाया सरकार बनाएको थियो । जसमा, डा. नारायण खड्का छाया परराष्ट्र मन्त्री थिए ।
त्यसै गरी डिला सङ्ग्रौला श्रम, राजेन्द्र केसी वन, बहादुरसिंह लामा सञ्चार, उमा रेग्मी महिला, सञ्जय गौतम भौतिक पूर्वाधार, उमाकान्त चौधरी सहरी विकास, देवेन्द्रराज कँडेल पर्यटन र भीमसेनदास प्रधानले रक्षा मन्त्रालयको छाया जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । त्यस्तै दिलेन्द्रप्रसाद बडू छाया गृहमन्त्री थिए भने डा मिनेन्द्र रिजाल छाया अर्थमन्त्री थिए ।
देउवाले छाया मन्त्रालयका आधारमा मन्त्रीहरु नियुक्त नगरिने सङ्केत दिइसकेका छन् । यसैअनुसार गृहमा काँग्रेस बालकृष्ण खाँण र अर्थमा माओवादीबाट जनार्दन शर्माले जिम्मेवारी पाइसकेका छन् । छाया उर्जामन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की कानुन मन्त्री भएका छन् भने माओवादीबाट पम्फा भुसाल उर्जा मन्त्री भनेकी छन् ।
यतिबेला नेपाली काँग्रेसबाट डा. मिनेन्द्र रिजाल, मानबहादुर विश्वकर्मा, दिलेन्द्र बडू, देवेन्द्र कँडेल, डिला सङ्ग्रौला, तेजुलाल चौधरी, बहादुरसिंह लामा, मोहनप्रसाद पाण्डे, राजेन्द्र केसी, सञ्जय गौतम, उमा रेग्मी, तारादेवी भट्ट उमाकान्त चौधरी, किशोर सिंह, भीमसेन दास प्रधान, जितेन्द्र देवलगायत मन्त्रीको लबिङमा छन् ।
देउवा पक्षबाट पूर्णबहादुर खड्का, मानबहादुर विश्वकर्मा, बहादुरसिंह लामा, डिला सङ्ग्रौला, देवेन्द्रराज कँडेल, किशोर सिंह, उमा रेग्मी, तारादेवी भट्ट, जितेन्द्र देव लगायतको नाम चर्चामा छ । यस्तै पौडेल पक्षबाट रिजाल, बडू, तेजुलाल चौधरी मोहनप्रसाद पाण्डे, राजेन्द्र केसी र सञ्जय गौतम लगायतको नाम चर्चामा छ ।
यस्तै सिटौला टिमबाट गगन थापा, उमाकान्त चौधरी र भीमसेनदास प्रधानमध्ये एक जना मन्त्री बन्ने पक्का छ । तर, यसपटक कोटाबाट मन्त्री बन्ने मुडमा गगन थापा छैनन् । प्रधानमन्त्री देउवाले आफूसँग सहयोग नमागेको परिस्थितिमा उनी सरकारमा जाने पक्षमा छैनन् । थापा बाहेक काँग्रेसले गठन गरेको छाया सरकारमा छायामन्त्री प्राय सबैले मन्त्रीको दाबी गरिरहेको काँग्रेस स्रोत बताउँछ ।
तर, काँग्रेसले एकलौटी सरकार नबनाएको र गठबन्धनमा पनि भागबन्डा गर्नुपर्ने भएकाले काँग्रेसका सबै छाया मन्त्रीहरूले मन्त्री बन्न पाउने स्थिति छैन । माओवादी र जसपालाई मात्रै लिएर सरकार बनाउँदा काँग्रेसले ५० प्रतिशत अर्थात् १२ जनासम्म मन्त्री पाउन सक्छ ।
तर, माधव नेपाल पक्ष पनि सरकारमा आयो भने काँग्रेसको भागमा ५÷७ वटा मात्रै मन्त्रालय पर्ने देखिन्छ । त्यसमध्ये प्रधानमन्त्रीसहित काँग्रेसले ती नजना पाइसकेको छ । यो अवस्थामा काँग्रेसका धेरै नेताहरूले मन्त्री पाउन सक्ने देखिँदैन । विगतमा जसरी देउवाले ४८ जनाको जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाउन सक्ने अवस्था छैन । संविधानले नै २५ जनाभन्दा बढीको मन्त्रिपरिषद् बनाउन दिँदैन ।
गृहमा खाँणको बाजी
यसपटक नेपाली काँग्रेसमा गृहमन्त्रीका लागि खासै रस्साकस्सी भएन । देउवाले आफ्नो विश्वास पात्र मध्येका एक बालकृष्ण खाँणलाई गृहमन्त्री बनाए । किनभने, गत चुनावमा काँग्रेसका अधिकांश सिनियर नेता पराजित भएको फाइदा खाँणले उठाए । यद्यपि अरू नेताहरूले खाँणलाई रोक्न नखोजेका होइनन् । तर, देउवाले तरुण दलका पूर्व अध्यक्ष खाँणलाई रोजे । गृहमन्त्रीमा देउवाका लागि उनी निर्विकल्प जस्तो देखिए ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदार नफसेका भए गच्छदारले गृहमन्त्रीमा दाबी गर्ने सम्भावना रहन्थ्यो । तर, उनको सांसद पद अहिले पनि निलम्बनमा छ । यसले पनि खाँणका लागि सहजता प्रदान गर्‍यो । यता देउवा सरकार निर्माणमा सुरुदेखि सक्रिय रहेका महामन्त्री पूर्णबहादुर खाँणको रोजाइमा पनि खाँण नै परे । खड्काले यसपटक गृहमन्त्रीमा आफूले दाबी गरेनन् ।
यस्तै सार्वजनिक रूपमा १४ औँ महाधिवेशनमा सभापतिमा दोहोरिने योजना सुनाएका देउवाको मन जित्ने गरी खाँणको भाषण ले पनि काम गर्‍यो । संस्थापन पक्षका शीर्ष नेताहरू देउवालाई सभापति बनाउन सार्वजनिक रूपमा खुलिनसकेका बेला खाँणले वर्तमान परिस्थितिमा काँग्रेस सभापतिमा देउवाको अपरिहार्यता औँल्याएका थिए ।
असार २६ गते देउवा जिताउने रणनीति बनाउन वीरबहादुर बलायरले आयोजना गरेका कार्यक्रममा पनि खाँण खुलेर देउवाको पक्षमा उभिए । सो भेलामा नेता ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई पनि बोलाइएको थियो ।
तर, पछिल्लो समय सभापतिका दाबी गरेर रहेका उपसभापति विमलेन्द्र निधिसँग नजिकिएका कार्की भेलामा सहभागी भएनन् । यसलाई पनि देउवाले नोट गरेको बुझिएको छ । वर्तमान यो परिस्थितिले पनि खाँणलाई गृहमन्त्री बन्न सहजता प्रदान गरेको देखिन्छ ।
काँग्रेस नेताहरूले देउवालाई अर्थ मन्त्रालय लिन सुझाव दिए पनि गृह राख्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । देउवालाई मन्त्रिमण्डल गठनबाटै चुनावी सरकारको सन्देश दिन खोजेको कतिपयको बुझाइ छ । त्यसलाई पूर्व गृहमन्त्री सिटौला पनि स्वीकार गर्छन् ।
‘चुनावी वर्ष लाग्यो । विश्वासको मत पाए पनि वर्ष दिनभित्रै निर्वाचन (स्थानीय तह) हुन्छ । विश्वासको मत नपाए ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुन्छ । त्यो बाध्यता हो ।’
यद्यपि गृहमन्त्री आफ्नो भएर वा सरकारमा बसेर चुनाव जित्ने र बाहिर हुँदा चुनाव हार्ने भन्ने नहुने उनको भनाइ छ । ‘पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनले चुनावी परिणाम दिने कुरा हो । सरकार सञ्चालन गर्ने बेग्लै कुरा हो,’ सिटौला भन्छन् । राताेपाटीबाट साभार